Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawadda oo xafiis ka furatay degmada Jowhar – Radio Muqdisho
Wasaaradda gaadiidka iyo duuliskta hawada ayaa xafiis ka furtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka gobolka Sh/Dhexe.
Abuukar Maxamed Bacadle oo ah wariyaha Radio Muqdisho uga soo warama gobolka Sh/Dhexe ayaa kusoo waramaya in mas’uuliyiin ka socota wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ay shalay gaareen magaalada Jowhar halkaana ay kusoo dhaweeyeen mas’uuliyiint amaamulka G/Sh/Dhexe iyo kan degmada Jowhar.
Mas’uuliyiinta ka socotay wasaaradda gaadiidka ayaa magaalada Jowhar ka furay xafiis rasmi ah oo qabandoona adeegyadii looga baahnaa wasaaradda, kuwaas oo ay ka mid yihiin bixinta ruqsadda wadidda gaadiidka ee loo yaqaano Leysinka iyo warqadaha la xiriira lahaanshaha ama milkiyadda gaadiidka.
Dhinaca kale isla shalay ayaa magaalada Jowhar waxaa ka howlgalay ciidanka nabadgelyada waddooyinka,ee Taraafikada, kuwaasoo wadayaasha weydiinaya ruqsadda wadida gaadiidka, iyagoo ilaalinaya shuruucda maridda wadooyoonka.
Maamulka iyo bulshada ku nool degmada Jowhar ayaa soo dhaweeyay in wasaaradda gaadiidku ay noqotay wasaaraddii ugu horeysay ee ka howlgashay degmada Jowhar, kadib markii ay shalay xafiis ka furay halkaasi.
Culimada Galdogob oo ku baaqay in laga qayb qaato Dhismaha Dugsiga Hooyo ee Galdogob "SAWIRRO"